बेलायतमा अब्बल हुँदै दोस्रो पुस्ताका पर्वतेली
पुख्र्यौली घर पर्वतको बिहादी १ बाच्छा भएकी सृजना गुरुङ सन् २०१७ को मिस यूके नेपाल बनिन् । सुन्दरता मात्रै हैन उनी बौद्धिक एबम समाजसेवी पनि हुन् । वायो मेडिकल साईन्स अध्ययन सकेर एक औषधी कम्पनीमा उनले काम गर्छिन र विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत सामेल छिन् । उनी पर्वतेली चेलीहरुमा एक अव्वल छोरीको रुपमा आफुलाई परिचित गराउन सफल भएकी छिन् । केहि समय अगाडी पर्वतमा रहेका विरामीहरुलाई आफ्नो पहिलो तलव सहयोगमा खर्चिने रजनी गुरुङ पेशाले चिकित्सक हुन् । उनी लिभरपुल यूनिभर्सिटीबाट डेन्टिष्ट पढाई सकेर दन्त चिकित्सकको रुपमा सेवारत छिन् । डा. रजनीको पुख्र्यौली घर फलेवास नगरपालिका ठानामौला हो । समाजसेवा गरेर जिल्लाभर चर्चित परिवारमा जन्मिएकी रजनीमा पनि समाजसेवाको भावना छ । उनका हजुरबा एम प्रसाद गुरुङ प्रख्यात राजनीतिज्ञको रुपमा जिल्लाभर प्रख्यात छन्।
यि त केहि अब्बल पर्वतेली चेलीहरुको उदाहरण हो । यिनीहरु जस्ता अरु धेरै दोस्रो पुस्ताका पर्वतेलीहरु बेलायतमा अब्बल बन्न थालेका छन् । बेलायतमा अब्बल बन्नेमा पुख्र्यौली घर पर्वतको भवरकोट भएकी डा. रेखा गुरुङ क्याम्व्रिज हस्पिटलमा कार्यरत छिन् ।दुर्लुङ्गकी डा. बिनु गुरुङ अहिले बेलायेती हस्पिटलमा कार्यरत छिन् ।सोहि स्थानकी डा. प्रितिका गुरुङ र राम्जाका डा. सुदर्शन गुरुङ पनि चिकित्सक पेशामा अब्बल बनेका यूवापात्र हुन् ।यसै गरि पैयुँ घर भएका टुकराज राना, सरिता राना र कुश्माकी अस्मिता गिरी एमविविएस अध्ययन सकेर बेलायतको अस्पतालमा चिकित्सक पेशामा कार्यरत हुनुहुन्छ । गिरिले पढाईमा तीक्ष्ण भएर स्वर्ण पदक समेत पाएकी हुन् र हाल उनि लण्डनको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत छिन् । एमविविएस पढ्नेहरुको लहर पनि बढ्दो छ । पैयुँकी रोशनी राना एमविविएसको पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।
डाक्टर वाहेक बेलायतमा नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा पनि पर्वते युवायुवतीको संग्लनता छ। दुर्लुङ्गका निमन्त्रणा गुरुङ र रोजी गुरुङ नर्सिङ पढेर बेलायतको प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत छिन् । दुर्लुङकी सोनिया गुरुङ माइक्रो बाइलोजीमा मास्टर्स सकेर अहिले बैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत छिन् । साथै जलजला घर भएकी अस्मिता शर्मा पनि बायो मेडिकल साईन्स पढेर एक प्रतिष्ठित काममा लागेकी छिन् । रानीपानी ३ का डा.वासुदेव पौडेल बायोलोजिमा पिएचडी गरेर अनुशंधनकर्ताको रुपमा कार्यरत छन्।
चिकित्सा क्षेत्रबाहेक अरुमा पनि उत्तिकै अब्बल रुपमा देखा परेका छन्। रानीपानी पुर्खौली घर भएकी डा. प्रतिक्षा पौडेल पनि फिजिक्समा पिएचडी गरेर बेलायती कम्पनीमा कार्यरत छिन्। सोहि स्थानकी प्रज्ञा पौडेलले कम्प्युटर साईन्समा पिएचडी गरेर बेलायतको तथ्यांक विभागमा कार्यरत छिन्। राम्जाका विशेष गौतम कम्युटर ईन्जिनियर हुन् । उनी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी अमेजनमा सफ्टेवयर ईन्जिनियरको रुपमा कार्यरत छन् । रानीपानीका सुरेश कुँवर र भरत पौड्याल कम्प्युटर इन्जिनियरको रुपमा एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कार्यरत छन् ।यसै गरि कुश्माकी सुष्मिता गिरिले डिजीटल मार्केटिंगमा मास्टर्स सकेर बेलायतको आइटी कम्पनीमा काम गर्दै छिन्। पैयु पुर्खौली घर भएकी आरती थापा एयरोनटिकल ईन्जिनियरको रुपमा कार्यरत छिन्।
फलेवास नगरपालिका थापाठानाका संजय भण्डारी चार्टर एकाउन्टेन्टको रुपमा काम गर्दछन। बेलायतको प्रख्यात संस्था कप्लान फाइनान्सबाट अध्ययन गरेका भण्डारी समाजसेवामा पनि सामेल छन् र पर्बत वेलफेर सोसाइटीमा समेत आबद् छन्। यसै गरि राम्जाकी समिक्षा गुरुङ बेलायतको किंग्स कलेजमा एकाउन्ट विभागमा बरिस्ठ पदमा कार्यरत छिन्।
ब्रिस्टोल बिश्वबिध्यालयमा आर्किटेक्चर पढेकी कुश्माकी अनुपा पुरीले आफ्नै कम्पनी मार्फत आर्किटेक्चर कन्सल्टटेन्सी सेवा प्रदान गर्दै आएकी छिन् । उनले आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरिङको काम गर्छिन ।
नेपालीहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुन जाने बिगतको ईतिहाँस अहिले बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । सेनामा भर्ना हुन मात्रै नेपाली बेलायत पुग्थे भन्ने पुरानो चलन हो । अहिले यहाँ जाने नेपाली दाजुभाईका छोराछोरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा हुने हरेक खाले पेशा, व्यवसाय, अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा पोख्त हुन थालेका छन् । कलाकारितामा समेत यहाँ रहेका दोस्रो पुस्ता आकर्षित भैरहेको पाईन्छ। पर्बत वेलफेर सोसाइटीका अध्यक्ष नेत्र आलेले पर्बतनेपाल संग कुरा गर्दै पर्वते युवायुबतिको प्रगतिले आफुलाई खुसि लागेको र उनीहरुको ज्ञान र सिप नेपालमा समेत लैजान पर्नेमा जोड दिनु भयो।
बेलायतमा रहेका दोस्रो पुस्ताले आफ्नो रहनसहन, संस्कृति र चाडबाड बिर्सँदै गएकोमा भने सबै जना चिन्तित छन् । पूर्व मिस यूके सृजना गुरुङले नेपालबाट बिदेशमा आएर पनि आफ्नो प्रतिभा देखाएर सफल भएको बताईन् । उनले आफु र अरु नेपाली दाजुभाईहरु बेलायतमा आएर अब्बल बन्नुमा नेपालीहरुका बिचमा भएको एकता र हौसला नै मुख्य रहेको बताईन् ।
दोस्रो पुस्ताले नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दोस्रो पुस्तालाई नेपाली संस्कार र संस्कृति नभुलुन भनेर उनीहरुलाई सन्जाल निर्माण गरि संस्कार र संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न भैरहेका छन् ।
नोट : पर्वत नेपाल डटकमले बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले के के पेशा गरिरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था कस्तो छ । नेपालको लागि उनीहरुले के के गर्दैछन् भन्ने बारेमा अन्य श्रृखंलामा पनि यस्तै सामाग्री प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। येदि हजुरहरु जोडिन चाहनु हुन्छ भने यो फरम https://forms.gle/n5yxnjoS48L8a8fW7 भर्नु होला
पैयुँखोला समाज यूकेद्धारा पैयुँ गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण 383
बेलायतमा अब्बल हुँदै दोस्रो पुस्ताका पर्वतेली 1118
आचार्यको निधन प्रति पर्वत वेलफेयर सोसाईटी युकेद्धारा शोक व्यक्त 473
नेपाली मुलका कृष्ण क्षेत्री बेल्जियमको लुभेन नगरपालिका सदस्यमा चयन 191
तमुधिं यूकेको अध्यक्षमा पर्वतका गुरुङ निर्बाचित , पर्बत वेलफेर सोसाइटी द्वारा बधाई 458
युकेमा रहेका समाजसेबी गुरुङको निधन, वेलफेयर सोसाईटी यूकेद्धारा दुख व्यक्त 389
बेलायतमा व्यापार, व्यवसायमा पकड बनाउँदै पर्वतेलीहरु 430
पर्वत वेलफेर सोसाइटी यूकेको अध्यक्षमा पुन: नेत्र आले 300
पर्बत वेलफेर सोसाइटी युकेद्वारा रकम हस्तान्तरण 346
नोभेम्बर ८ मा पर्वत वेलफेयर सोसाइटी युकेको साधारणसभा 341